Kwete chete kushanya kwakazopera muArgentina, Uruguay neParaguay Svondo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Kwete chete kushanya kwakazopera muArgentina, Uruguay neParaguay Svondo
Argentina Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Paraguay Breaking News • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Uruguay Kupwanya Nhau
Kwete yekushanya chete yakazomira yakamira neSvondo, asi zviitiko zvakawanda zvakagurwa kumamirioni gumi evanhu muArgentina, Uruguay neParaguay mushure mekudzima magetsi.
Zviremera zvaive zvichishanda nekushingairira kudzoreredza simba, asi chetatu chevanhu vekuArgentina mamirioni makumi mana nemana vaive vachiri murima nekutanga kwemanheru.
Zvifambiso zveruzhinji zvakamiswa, zvitoro zvakavharwa uye varwere vanovimba nemidziyo yekurapa yekumba vakakurudzirwa kuenda kuzvipatara nemajenareta.
Grid yemagetsi yeArgentina iri munzvimbo yekusagadzikana, iine zvigadziriso netambo zvisina kukwidziridzwa zvakakwana semitengo yemagetsi yakaramba yakanyanyisa kuita chando kwemakore. Imwe nyanzvi yezvemasimba yakazvimirira yeArgentina yakati systemic mashandiro uye mhosho dhizaini dzakabatsira mukudonha kwemagetsi.
Kambani yemagetsi yeUruguay UTE yakati kukundikana kwehurongwa hweArgentina kwakatemesa simba kuUruguay yese panguva imwechete uye kwakakonzera kudonha kwe "chikanganiso muinternet network."
MuParaguay, simba munharaunda dzekumaruwa kumaodzanyemba, padhuze nemuganhu neArgentina neUruguay, rakatemwawo. National Energy Administration yemunyika yakati sevhisi yakadzorerwa masikati nekudzosera simba kubva kuItaipu hydroelectric chirimwa icho nyika ichigovana neBrazil yakavakidzana.
MuArgentina, chete ruwa rwekumaodzanyemba rweTierra del Fuego haruna kukanganiswa nekudzima nekuti harina kubatana negiridhi huru yemagetsi.
Vakuru veBrazil neChilean vakati nyika dzavo hadzina kukanganiswa. Kubuda kwacho kwaive kusati kwamboitika munhoroondo yazvino.